​भन्ने पढ्छु, गर्ने अर्थोकै
काठमाडौं । विदेशमा अध्ययन गर्न जान ‘नो अब्जेक्सन लेटर’का लागि आवेदन दिने अधिकांश विद्यार्थी रोजगारीका लागि जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । उपल्लो तहमा अध्ययन..
​मेडिकल काउन्सिलद्वारा २३ कलेजको सिट संख्या निर्धारण
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यस वर्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थी संख्या निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलको २५ र २९ असोजमा बसेको पूर्ण बैठकले शैक्षिक सत्र..
​शिक्षा ऐनको संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषदमा, डा. केसीका मागमा वार्ता गर्न सरकारलार्इ आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले शिक्षा ऐन, २०२८ आठौँ संशोधन विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयबाट आफूले अपेक्षा गरेअनुसार समयमा समर्थन नभए पनि विधेयक चाँडै संसदमा आउने बताएकी छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ..
​कक्षा १२ को विज्ञान विषयको नतिजा सार्बजनिक, गतबर्षको भन्दा धेरै उत्तीर्ण, ७० जनाको परीक्षा रद्ध
काठमाडौं । उच्च माद्यमिक शिक्षा परिषदले कक्षा १२ को विज्ञान र सँस्कृत विषयको परीक्षाफल सार्बजनिक गरेको छ । शुक्रबार सार्बजनिक नतिजा अनुसार नियमित तर्फ ७१ दशमलव ६५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण..
​‘विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका पदाधिकारी तत्काल पदपुर्ति गरियोस’
काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको पदहरुमा तत्काल पदपुर्ति गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । बुधबार बिहान बसेको संयुक्त बैठकले उक्त पदका लागि राजनीतिक भागबण्डा भन्दा माथि उडेर..
​एमबिएस र एमए अर्थशास्त्रको परीक्षाफल प्रकाशित
काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले २०७१ मङ्सिर/पुसमा सञ्चालित व्यवस्थापन सङ्कायतर्फका स्नातकोत्तर तह (एमबिएस) प्रथम वर्षको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गरेको छ। यसैगरी २०७१ मङ्सिर/पुसमा सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायतर्फ..
​शल्यक्रियाका क्रममा डाक्टर नै बेहोस, बिरामीको मृत्यु
मुम्बई । भारतको मुम्बईमा एक बिरामीको शल्यक्रिया गर्न लागेका चिकित्सक नै बेहोस भएपछि बिरामीको मत्यु भएको छ । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार मंगलबार सियोन अस्पतालमा मुम्बई निवासी ६५ वर्षीय वामन जारेको फोक्सोको..
चौधरी फाउण्डेसनद्वारा भक्तपुरमा क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण
काठमाडौं । चौधरी फाउण्डेसनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भक्तपुर दरवार स्क्वायर क्षेत्रको विद्यार्थी निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण गरी शुक्रवार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी..
​त्रिवि र भारतको आसाम डाउन टाउन विश्वविद्यालयबीच सम्झौता
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र भारतको आसामस्थित डाउन टाउन विश्वविद्यालयबीच आपसी शैक्षिक तथा प्राज्ञिक आदानप्रदान सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको छ । त्रिविका उपकुलपति डा हिराबहादुर महर्जन र आसाम विश्वविद्यालयका उपकुलपति..
​पाल्पामा एक करोड ७४ लाखको छात्रवृत्ति वितरण
पाल्पा । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यस शैक्षिकसत्रमा करिब रु एक करोड ७४ लाख छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । प्रावि अपांग छात्रवृत्ति १९ लाख ८६ हजार रूपैयाँ, दलित छात्रवृत्ति २७ लाख ७७..
​कक्षा ११ को भर्ना फाराम शुल्क २५ रुपैयाँ निर्धारण
काठमाडौ । कक्षा ११ मा भर्ना हुनका लागि उच्च माविहरुले फाराम शुल्कबापत २५ रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने भएका छन् । कतिपय उच्च माविले जथाभावी धेरै शुल्क लिएको पाइएपछि उच्च माध्यमिक..
एसएलसीमा ४७.४३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण, ​यसरी हेर्न सकिन्छ एसएलसीको नतिजा
काठमाडौं । वि.सं. ०७१ सालको एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । यस वर्ष नियमिततर्फ ४७.४३ प्रतिशत विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण भएका छन् । विशिष्ट श्रेणीमा २१ हजार ४ सय ४७ जना उत्तीर्ण..
​पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अध्ययन केन्द्र अब नेपालमै
​काठमाडौं । आँखा र कान विशेषज्ञ उत्पादन गर्दै त्यससम्बन्धी सबैखाले सेवा प्रदान गर्न नेपालमै पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अध्ययन केन्द्र तथा अस्पताल सञ्चालनमा आउने भएको छ। स्वदेशीसँगै विदेशी विद्यार्थीलाई एमडी अफथालमोलोजी,..
काठमाडौं । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन गरेर प्लस टुको पढाइ सुरु भएको दुई दशकपछि शिक्षा मन्त्रालयले पहिलोपटक शिक्षकको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। स्थायी दरबन्दी स्थापना भएपछि आर्थिक समस्यामा..
​वीर अस्पतालको आइसियुका लागि जापानी महिलाले दिइन् एक करोड दुई लाख
काठमाडौं । एक जना जापानी महिलाले वीर अस्पताललाई एक करोड दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् । जापानी महिला योगमाता काइको आइकावाले वीर अस्पतालको आइसियु सञ्चालनका लागि एक करोड २..
​अल्का र नर्भिकले सरकारको अनुदान नलिने
काठमाडौं । अल्का अस्पतालले भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुको उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारबाट नलिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय बिपत्तीमा थोरै भएपनि सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यले सरकारले दिने भनिएको रकम नलिएको अल्का..
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा १४ करोड क्षति
चितवन । यही वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा १४ करोड रूपैयाँभन्दा बढिको क्षति पुगेको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति हेटौँडामा रहेको वन विज्ञान सङ्कायको..
​मौसमी सिजिनल फ्लु र स्वाइन फ्लु कारण जाजरकोटका चार सय ३२ विद्यालय बन्द
जाजरकोट । जाजरकोटमा मौसमी सिजिनल फ्लु र स्वाइन फ्लुका बिरामी दैनिक बढेपछि यहाँका सबै विद्यालय आजदेखि बन्द गरिएको छ । जिल्लाका २७६ प्रावि, निमावि ९२ र ६४ वटा मावि विद्यालयको..
​विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि अस्ट्रेलियाको ३१ करोड बढी अनुदान
काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू। ३१ करोड १४ लाख अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ । छ वर्षदेखि सञ्चालित उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अस्ट्रेलियाले अनुदानस्वरुप..
शिक्षा शास्त्र संकायबाहेक अन्य संकायमा अध्ययन गरेकाहरुलाई शिक्षकको जागिर रोक्न माग
काठमाडौ । शिक्षा शास्त्र संकायबाहेक अन्य संकायमा अध्ययन गरेकाहरुलाई शिक्षकको जागिर दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा शिक्षा संकायकै अध्यायन अनुमति पत्र लिएका..
​ अज्ञात रोगले एक छात्राको मृत्यु परीक्षा दिएका ३४ विद्यार्थी बिरामी
जाजरकोट । रुघाखोकी, हातखुट्टा झमझमाउने र जिउ काम्ने रोगले यहाँ प्रवेशिका परीक्षा दिएकी एक छात्राको ज्यान गएको छ । जिल्लाको पश्चिमी गाविस अर्छानीको भगवती माविबाट यस वर्षको परीक्षा दिएकी सुस्मिता..
साढे ३ बजे केसीको अनशन तोडिने, डा केसी र मुख्यसचिवबीच सहमतिमा हस्ताक्षर
काठमाडौ । डा गोविन्द केसी अनशन तोडेको १२ औं दिन आज साढे ३ बजे तोडिने भएको छ । डा केसी र सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले भर्खरै सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर..
​आठ विद्यालय गाभ्ने र २१ को कक्षा घटाउने निर्णय
चितवन । जिल्ला शिक्षा समिति चितवनले जिल्लामा सञ्चालित विद्यालयमध्ये आठ वटा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला शिक्षा समितिको बुधबार बसेको बैठकले विद्यार्थी कम भएका र भौतिक पूर्वाधार नपुगेका आठ..
​देशभरका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाका आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा ठप्प
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घले सरकारले अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै देशभरका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाका आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा ठप्प पारेको छ । डा..
मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्नु अरवौं डुबाउने खेल
काठमाडौं । बरिष्ठ चिकित्सक र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिनको कार्यालयले नयाँ सम्बन्धन रोकेर निजी लगानी डुबाउने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र (लेटर..
​प्रवेशिका परीक्षामा पौने छ लाख सहभागी, वैद्यकी श्रीमती पनि परीक्षार्थी
काठमाडौ । माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो मानिने प्रवेशिका परीक्षा बिहीबारदेखि देशभर सुरू भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका सबै जिल्लामा एकै साथ परीक्षा गरिने हरेक वर्षको व्यवस्थाअनुरुप यस वर्ष नियमित..
​२६ विद्यालयका उत्कृष्ट एक सय दुई छात्रछात्रालाई चौधरी ग्रुपको छात्रवृत्ति
काठमाडौं । नवलपरासीका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई चौधरी ग्रुपले छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । २०७० सालमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षामा उत्कृष्ट स्थान ल्याउने विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति वितरण गरिएको हो । ग्रुपले प्रत्येक वर्ष ज्ञान..
​नेपालमै पहिलो पटक ३ शैक्षिक संस्था मिलेर इएमबिए कोर्स
काठमाडौं । काठमाडौं डनबस्को कलेजले, लिटिल एञ्जल्स स्कूल र जेभियर एकेडेमीसँगको सहकार्यमा एक्जुकेटिभ माष्टर्स इन बिजनेश एडमिनेष्ट्रेसन (इएमबिए) कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक ३ वटा शैक्षिक संस्था..
​चितवनमा चारजनालाई स्वाइन फ्लु
चितवन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्वाइनफ्लुको माहामारी फैलिरहेका बेला सिमाना जोडिएको नेपालको चितवनमा चारजनामा स्वाइनफ्लुको सङ्क्रमण भएको फेला परेको छ । चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालबाट पठाएका नमुना परीक्षणमा चार जनामा स्वाइनफ्लु ‘इन्फुल्न्जा..
​हिसानको कार्यालय सेन्ट्रल पार्कमा
काठमाडौं । उच्च माध्यामिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)ले सेन्ट्रल बिजनेश पार्कमा रहेको भवनमा आफ्नो कार्यालय खरीद गरेको छ । क्लिन इन्स्ट्रक्चर समूहले काठमाडौंको थापाथलीमा बनाएको उक्त सेन्ट्रल पार्कको भवनमा हिसानले कार्यालय..
Results 222: You are at page7of 8